Ray aman-dreny nahatezitra - Dadabe Noely tsy misy! | Apg29
Ray aman-dreny nahatezitra - Dadabe Noely tsy misy!
Raiki-tahotra ao amin'ny fivarotana foana. Sary: Youtube / SVT.
"Ny fizarana voalohany hilaza fa tsy misy Santa ary fa misy olon-dehibe izay akanjo ny be loatra ho antsika."
Mamitaka sy hamitaka ny ankizy
Isan-taona amin'ny Noely ny olon-dehibe maro no nianatra ny zanany mba mino ny antony - na dia ny Kristianina sasany. Izany dia ny namitaka sy hamitaka ny zanany. Tsy tokony hampianatra azy ireo hino ny antony, fa tokony homena azy i Jesosy!
Ny fizarana voalohany ao amin'ny kalandrie advantista "korontana foana tao amin'ny tsena" dia nahatezitra ray aman-dreny sasany, eny, na dia ny haino aman-jery. Izany hoe dia nisy soso-kevitra fa Santa tsy misy!
"Taitra izahay!", Hoy ny ray aman-dreny tao amin'ny pejy Facebook SVT rehefa nahita ny fandaharam-potoana. "Ny ankizy mino Dadabe Noely ary ankehitriny dia hijanona eto, ary ho niasa saina ny amin'ny fanontaniana dia ho momba izany."
Eny ary, inona no azonao momba ny lahatsoratra?
Toy ny hoe tsy ampy izany. Ity indray izy;
"Tohina izahay! Tsy fantatro raha toa ny ankizy dia mbola hahita zava-misy io. "
Donald Trumps fahamarinana
Misy toa tena saro-pady ny fanontaniana Santa tena misy. Tamin'ny taon-dasa dia isika filoha Donald Trump ny baotin'i dia nanontany ny toerana tena misy izy.
7 taona Collman Lloyd niakatra ho any Donald Trump ny tariby-in teo amin'ny tetika. Nanontany tena izy raha toa angamba antitra loatra izy ka tsy mino izay Santa, fa ny fianakaviana no nahatonga azy hetsika izao tsy mba manontany Santa ny fisian'ny.
Ahoana raha tsy afaka nanampy olon-dehibe, fa ny indoctrinate ny zanany amin'ny lainga ity! Inona avy ireo matahotra? Ny tena marina dia Dadabe Noely tsy misy?
"Nandainga ho azy ireo nandritra ny taona maro"
Izany no hoe nahoana no tsara kokoa ny mampianatra azy ireo ny marina momba an'i Jesosy fa tsy ny lainga ny tany. Avy eo, dia afaka miantehitra foana, izay milaza fa marina, ary ny fitokisany amin'ny tenany dia ho raikitra.
Miahiahy aho fa ny elf-finoana no zava-dehibe kokoa ho an'ny olon-dehibe noho ny ho an'ny ankizy. Misy ny olon-dehibe izay sahiran-tsaina tsindraindray mino Dadabe Noely, fa ny ankamaroany kosa tsy mba. Nahoana isika no tokony Miafina ao amin'ny ankizy izany?
Andro iray talohan'ny Noely Eva 2007, dia nanoratra momba ny olona sahiran-tsaina toy izany - ny Asatru olona izay mino Dadabe Noely. Santa izy dia mino fa ny fanahy izay maha izay ananany ao an-tranony. Izy mamaritra ny demonia!
Izany no famaritana tsara fa Dadabe Noely tena na inona na inona. Dadabe Noely dia nisy fanahy ratsy izay te-mamitaka ny olona mba hino Azy fa tsy Jesosy!
St. Nicholas no evekan'i Myra any amin'ny atsimoandrefan'i Lill-Asia amin'ny 300 ny. Nanambara izy ny olo-masina, satria malala-tanana izy.
Voalaza fa namonjy ny vehivavy avy amin'ny fivarotan-tena amin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo vola madinika volamena. Izy lasa olo-masina mpiaro ny mpianatra.
St. Nicholas nanao asa maro araka ny angano. Rehefa namonjy ny fianakaviana avy amin'ny fahantrana tamin'ny fanipazana vola azy ireo amin'ny alina. Izao no nanome fanomezana toy ny amin'izao andro izao ny Dadabe Noely!
Fa Nicholas koa ny herin 'Andriamanitra no nifoha maty. Mihitsy aza izy namonjy tantsambo efa saika very tany amin'ny tafio-drivotra.
Ary rehefa efa beatified Nicholas, dia voalohany indrindra Nahazo teny fiderana ny tantsambo.
Ny andro firads 6 Desambra miaraka amin'ny Noely milalao ao amin'ny sekoly katolika. Ny ankizy izay efa nahazo fanomezana tsara.
Ireo izay tsy tsara na downright-doza nahazo tsirony ny vary iray nitafy tahaka ny devoly endrika Saint Nicholas nitondra.
Ao amin'ny firenena miteny anglisy fantatra amin'ny anarana hoe Dadabe Noely Dadabe Noely taorian'ny St. Nicholas.
Nandritra ny fanavaozana nahafoana ny herin'ny olo-masina, rehefa tsy afaka hanafoana ny fivavahana St. Nicholas, noho ny lazany.
Avy eo dia nanao azy ho Dadabe Noely! Izy avy eo raha tsy misy eveka ny satroka.
Araky ny vanimpotoana manify tsara izany, satria efa maty Nicholas tamin'ny Desambra. Ary izy miaraka amin'ny Noely sy ny fanomezana manome ho Dadabe Noely.
Amin'izao fotoana izao ny fivadiham-pinoana an'i Dadabe Noely izao no niandohan'ny hafa pinoana ka izay amin'izao fotoana izao dia na inona na inona mihoatra noho ny maty olo-masina.
Amin'ny 2017, ny gazety nanoratra ny tantaran'izao tontolo izao fa efa nahita lohavaniana taolana avy Nikoleo.
Dadabe Noely .
Ny sisa ny sisa tsy Dadabe Noely no voalaza fa ao amin'ny Basilica San Nicola von tany amin'ny faritra atsimon'i Italia. Izy dia kely, mahia lehilahy tokony ho 150 santimetatra.
Raha Dadabe Noely mihitsy no izy, dia azo antoka ny maty amin'izao fotoana izao! Ao amin'ny Katolika nankalaza izao tontolo izao ny fahafatesany tamin'ny 6 Desambra miaraka amin'ny fety lehibe.
Ho an'ny maro Dadabe Noely dia noforonina fotsiny toetra fa ampianarina ny ankizy mba hino sy mampiditra ny tenany dia tsy mba toy izany loatra amin'ny azy.
Milaza izy ireo fa midika na inona na inona, nefa nahoana no iray amin'ireo Fuss be momba azy? Nahoana izy ireo no hampianatra ny ankizy, rehefa nino Azy?
Dadabe Noely dia aseho miaraka amin'ny fahefana mihoatra ny natoraly, izy no "mahalala ny zava-drehetra", amin'ny heviny hoe fantany raha ny ankizy no tsara, izy koa "ubiquitous".
Voalaza fa izy tsara fanahy sy nandritra ny "tsara" sy marina overwhelms amin'ny be ny fanomezam-pahasoavana sy ny fanomezana.
Amin'ny teny hafa, andriamanitra! Izany dia hita mazava tsara rehefa mianatra sary azy. Izy mijery toy ny andriamanitra - sampy!
Dadabe Noely androany dia fifanjevoana avy amin'ny toe-javatra telo samy hafa. A Katolika olo-masina, ny tokotany vresige tetika avy amin'ny fiaraha-monina sy ny tambanivohitra Noely osy!
Inona no teny hoe "mofomamy"? Ny teny dia fanafohezana amin'ny teny tetika bisse. Izany dia endrika banga sy ny dialectal bise. Izany dia midika hoe lohany, ambony alika, na frezy.
Iza no mivavaka amin'ny Christmases?
Taona maro lasa izay dia nahare hoatra ny efa-taona zazalahy hoe: "Izaho mino an'i Jesosy nefa tsy Dadabe Noely." Izany dia zaza hendry.
Olon-dehibe fa ny sasany toa tsy ho tahaka ny hendry toy ny isan-taona, ny fitiavan-ny ankizy kely eo amin'ny antony tao. Tsy azoko hoe nahoana no zava-dehibe mba hahazoana ankizy hino an 'Santa. Ny ankizy tsy manana tomtetro mamitsaka ao mandra-olon-dehibe azy ireo any. Fa ny ankizy rehetra, manana finoana an'Andriamanitra tao am-pony teo anatrehan'i efa nandre momba an'Andriamanitra sy Jesosy, araka ny fikarohana. Ity fikarohana koa dia manamafy ny Baiboly ao amin'ny Mpitoriteny 3:11.
Iza no mitory momba ny Christmases, ary iza no ivavahantsika? Izany fotoana hiresahana momba an'i Jesosy. Marina fa dia zava-misy ara-tantara fa tamin'izay Noely, i Jesosy no teraka. Saingy zava-misy ara-tantara koa no dia teraka!
Ary nony Christmases isika manasongadina fa matetika i Jesosy no teraka teto an-tany. Nahoana izy no teraka? Teraka hamonjy - hamonjeko anareo sy ny ahy. Ary nanao izany ny ho faty sy ho fananganana.
Iza tokoa moa avy amin'ny fanomezam-pahasoavana?
Fotoana izao fa milaza ny ankizy izay tena handeha hankalaza amin'ny Christmases. Ary ny fotoana ihany koa ny ankizy mba hilaza izay tena ho tonga izany miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana.
Jakoba 1:17. -Tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny Rain'ny fanazavana, Izay tsy misy fiovana miseho ary tsy ara mazava sy ny maizina eo.
Ary ny fanomezam-pahasoavana tsy manam-paharoa dia omena fa isika kosa dia tsara fanahy, tsara tarehy ary manan-talenta!
Ny fanomezana lehibe indrindra dia i Jesoa Kristy, izay nirahiny ho amin'izao tontolo izao. Rehefa manaiky an'i Jesosy ho Tompo, dia ho lasa voavonjy eo, fa voavela ny fahotantsika rehetra.